गर्भमा ९ महिना ९ दिन नै बच्चा किन रहन्छ ? - DURBAR TIMES
HomeHealthगर्भमा ९ महिना ९ दिन नै बच्चा किन रहन्छ ?
शुक्र बलियो भएको खण्डमा जन्मने बच्चा पनि सुन्दर जन्मिन्छ । त्यसैले उक्त समयमा गर्भवती महिलाले चटपट चीज खानुपर्छ । दोस्रो महिनामा मंगलको प्रभाव रहन्छ । मंगल ग्रहको प्रभाव रहँदा गुलिया खानेकुरा खाएर र राता वस्त्र धारण गरेर मंगललाई बलियो बनाउन सकिन्छ । बृहस्पतिको प्रभाव हुन्छ, तेस्रो महिनामा ।
Previous articleभक्तपुरको खःमेय् जात्रा सम्पन्न
Next articleयूएफसी फाइटर खबिबद्वारा सन्यास